Iyo iPhone 7 inosvika muIndia pamutengo unorambidzwa | IPhone nhau
Kunyangwe panguva yekutenderera kwekutanga kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus dzakawanda dzaive nyika dzakabatanidzwa, nanhasi kuchine nyika kwadziri kusingawanikwe kana kwavakangoigamuchira, sezvazviri kuIndia. Apple iri kutarisa kufarira kwayo munyika ino, ine vanopfuura mamirioni 1.200 vagari, musika ungangodaro asi ichiri nzira refu kubva pakuva sosi yechokwadi yemari yevakomana veCupertino. Kuuya kweiyo iPhone nyowani kunetsa, nekuti mutengo weiyo terminal unokwira kusvika kumadhora mazana mapfumbamwe, inova hafu yemari yegore yevagari vazhinji.
Apple inotarisana nemitero yepamusoro izvo zvinowedzera zvakanyanya mutengo wema terminals munyika. Pa webhusaiti iyo Apple parizvino inotengesa zvigadzirwa zvayo kuburikidza nevechitatu mapato, tinogona kuwana iyo 7 GB iPhone 32 ye60.000. Rs, inenge $ 897,60, nepo iyo 256GB modhi inodhura kusvika maRs.80.000. Mhando inodhura zvakanyanya ndeye 7GB iPhone 256 Plus iyo yakatengwa paRs 92.000. Mubhadharo wepagore wemunhu muIndia madhora mazana mashanu nemakumi mashanu nerimwe, sekureva kwazvino chiteshi cheWorld Bank.
Iye zvino India inopa isingasviki 1% yemari yaApple iyo kambani ine 5% chikamu chemusika.kana. Parizvino vagadziri vakuru pamusika ndiSamsung, Micromax, Xiaomi, Lenovo neHuawei. Zvisinei neApple inoramba ichifarira nyika, mitengo yakakwira chipingamupinyi chikuru kumidziyo yayo yekuwedzera mugove wavo wemusika, kunyanya tichifunga kuti Apple haigone kutengesa zvigadzirwa zvakagadziridzwa mushure mekuramba kwehurumende. Asi zvichiri kuratidzika kunge zvakanyanyisa kuti Apple inoda kushandura India kuita China nyowani iyo yakabvumidza Apple kukura zvakanyanya mumakore apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo iPhone 7 inosvika muIndia pamutengo unorambidza
Iwe unotaura nezve zvinorambidza muIndia uye iwe unofananidza neavhareji muhoro imomo. Pano ini ndinofunga zvinodzivirirawo. Kubhadhara mazana masere euros yefoni kunoita kunge kunoshamisa kwandiri.
Ini ndinofunga zvakafanana, asi pano (muSpain) inoenda nenzvimbo. Pano ini ndinofunga kuti avhareji muhoro mune rakakura guta (Barcelona, ​​Madrid ...) iri € 1800. Kana iwe ukatama uchibva kumaguta, iyo yakajairwa muhoro haisi yakanyanya kudarika € 800 ... ini handina data rese, asi ini ndakaverenga kuti kuIndia iyo iPhone 7 inodhura hafu yemubhadharo wako. Kubva pane zvandinoziva (munzvimbo yangu nemumaguta akajairwa) iyo iPhone 7 inodhura zvakanyanya kupfuura avhareji yemwedzi muhoro. Ini ndinofunga mutengo watonyanya pano ...
Ivo vakati Pagore muhoro, wepagore ... nenzira munyika yangu (Cuba) iri madhora gumi nemashanu pamwedzi ... saka pagore rinenge riine madhora zana nemakumi masere ... ipapo kana zvichirambidzwa, asi kwete apple chete, chero chinhu , lol
Kana ichidhura, asi kwete kupfuura imwe yepamusoro-soro, kuona kana kuwedzera kuIndia vanounza nayo kuSpain kare, iPhone 7 pamwe ne128gb nhema yandanga ndakamirira kwemavhiki uye izvo zvasara .
Panyaya iri mukati mekumusoro-kumagumo sansumg semuenzaniso ndeye yemutengo mumwe chete, ese anodhura, kune akachipa mafoni kana iwe uchida, asi kana iwe uchida renji iwe unofanirwa kubhadhara yakawanda.
897 madhora? Zvakanaka, zvakafanana neni kuSpain, ini chete mumaeuro. Apple haisi yekupa mhosva kuti mihoro yakaderera kwazvo, mifananidzo yaunogadzira magetsi kuSpain wozvitengesa ne € 10 kana mumwe munhu achimuda kuIndia, ungadzikise mutengo? Zvakafanana zvinoitika kuGerman nemota dzavo, chii chinoitika kwatiri, vanofanirwa kuvasiya vakachipa nekuti isu veSpanish tinobhadharisa zvishoma nekuti chokwadi hachiratidzike senge chakarurama kwandiri
Iwe murume, idzi nhau dzinonzwisisika ... Pane mumwe wako arikupindura anowana € 1.500 / 1.600 pagore?
Zvinoenderana neruzivo rwuri pamusoro, uye nenzira yekutaura ... Kana tikatora muhoro wepagore we1581 madhora emunhu anobva kuIndia, unenge uri muhoro wemadhora 131,75 pamwedzi ... ndinofunga hazvigoneke kutenga timu kana vachifanira kudya, kupfeka, dzidzo, maakaundi, nezvimwe. Zvichida kune vanhu vazhinji vanogona kuitenga pasina matambudziko, kungave kune avo vane muhoro wemwedzi unodarika chiuru chemadhora kana maeuro, uye vanogona kutenga izvozvi zvigadzirwa zveApple
GTA San Andreas ine chakakosha dhisikaundi kune yakatemwa nguva